Egypt oge ochie mara ma mee ihe omume nke Yoga Sema Tawy - Afrikhepri Fondation
Satọde, Jenụwarị 23, 2021
Welcome N'ỤLỌ AFRICAN
Ancient Egypt maara ma na-eme Pharaonic Yoga Sema Tawy
DN'akwụkwọ ha Le Yoga des Pharaoh, Yogi Khane na nwunye ya Geneviève Khane (Agrégée na Docteur es Lettres, gụsịrị akwụkwọ na Egyptology na Mahadum Montpellier) gosipụtara na Ijipt oge ochie maara ma mee hatha-yoga, tinyekwara otu usoro guzo ọtọ. Ihe anyị na - akpọ ugbu a “Yoga Pharaonic” ma ọ bụ “Yoga nke Egypt” na-egosi ọnọdụ niile nke Ijipt bụ nke e ji akara kwụ ọtọ ha.
Pharaoh nke Yoga na omenala Asia
Agbanyeghị, pharaonic postcho anaghị emegide ụdị yoga dị iche iche a na-eme na India na mpaghara ndị ọzọ nke Eshia. Caitanya, nnukwu nna ukwu nke bhakti-yoga, nke a na-ahụta ka ọ bụ anụ ahụ nke Krishna, ka a na-egosipụtakarị na ogwe aka o buliri elu, na omume dị nso na ọnọdụ ndị Ijipt maka "ibuli elu igwe". N'ogige ụlọ nsọ nke Wat-Po, na Bangkok, anyị na-ahụ yogi na ogwe aka ya n'otu ọnọdụ ahụ. Anyị makwaara nke atụ nke akpụrụ akpụ nke Buddha guzoro, ogwe aka na oriọna. N'oge emume a ebe ha natara ụdọ dị nsọ, ndị Brahman na-eweli aka ha na ihe ndọba oriọna.
Egypt bụ isi mmalite nke ọtụtụ akụkụ nke ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ: ọgwụ, physiotherapy, mgbakọ na mwepụ, ije, na nkà ihe ọmụma bụ ihe sitere n'ike mmụọ nke ndị Ijipt nyefere Gris Egypt dịkwa na mmalite nke akara ngosi ndị Kraịst na alchemy. Okwu a "alchemy" sitere na okwu ndi Egypt Kemet, okwu nke kpoputara Egypt.
Omume vetikal nke yoga pharaonic dị mfe ịnweta, yana usoro dị egwu nke Yogi Khane tụpụtara site na eserese na bas-reliefs nke ụlọ nsọ ndị Egypt, dabara adaba na West na mmadụ taa . Ha achọghị mgbanwe ọ bụla ma nwee ike iji ya mee ihe n'ụzọ dị mma na nkwadebe maka ụfọdụ hatha-yoga.
Yoga sitere na Ijipt oge ochie nke Farao nwere ike ịme n'oge ọ bụla
Ụmụaka nwere ekele maka akụkụ ya dị egwu. Yoga Ijipt na-enyere ha aka ịmara ozu ha ma mee ka ha nwekwuo ike ịhazi mmegharị ha. Ọ na-akụziri ha otú ha ga-esi jiri ike ha mee ihe.
Ndị na-eto eto chọpụtara na ọzụzụ a na-eme ka ikike itinye uche ha dịkwuo mma ma na-enyere ha aka n'ọrụ ụlọ akwụkwọ: mgbe emechara yoga yoga, ha na-ekwu na ha na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ ma rụọ ọrụ nke ọma. Ọ na-adịrị ha mfe karị itinye uche ha na iburu ihe ha na-ebu n’isi.
Na ndị agadi, omume yoga na-enye ohere:
• Nweghachi nke ike
• ịmeghari akwụkwọ
• mmelite na ọbụna nlọghachite nke locomotion
• mmelite nke ụbụrụ na-arụ ọrụ: izu ike, iburu n'isi, nche.
Ụmụ nwanyị na-enwe mmetụta dị nro maka ọdịdị dị mma nke yoga Ijipt. Ndị mmadụ na-enwe ekele maka akụkụ dị ike ya, ihe nkenke ya, njigide ya.
Ọtụtụ ndị na-agwọ ọrịa na-ejikọ omume nke yoga nke Pharaonic na nnọzigharị ha na-enye ndị ọrịa ha, n'ihi na ịdọ aka na ntị a na-enyere aka ịgbanwe usoro musculoskeletal.
A pụrụ ime yoga Ijipt site n'àgwà nke ndụ kwa ụbọchị:
• mgbe ị na-eguzo
• mgbe ịnọ n'oche, bench ma ọ bụ stool nakwa na akwa
• mgbe ị dina ala.
Ọ dịghị achọ ngwá ọrụ ọ bụla. E si otú ahụ mee ka ọ bụrụ ezumike nká n'ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị na Algeria.
Na-ebi ndụ kwekọrọ na ibe gị